पेटको उपचारका लागि दिसा दान ! चल्दैछ नयाँ ट्रेण्ड |
Home विचित्र संसार पेटको उपचारका लागि दिसा दान ! चल्दैछ नयाँ ट्रेण्ड
मानवताको हिसाबले मानिसहरू आफ्नो शरीरका अंगहरू र मरिसकेपछि पूरै शरीर दान गर्नसमेत तयार हुन्छन् ।
रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान जस्ता दानहरूपछि अब नयाँ खालको दानको ट्रेण्ड सुरु भएको छ जसलाई दिसादान अर्थात् ‘पू डोनेसन’ भनिन्छ । आखिर के त्यस्तो आइलागेको हो, जसका कारण मानिसहरूलाई आफ्नो दिसासमेत दान गर्नुपरिरहेको छ ?
पेटमा हुने माइक्रोब्सले केवल खाने तथा पचाउने काम मात्र गर्दैनन् मानिसको मूड ठीक राख्ने काम पनि गर्दछन् । साथै मानिसको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने, शारीरिक तथा मानसिक तरिकाबाट स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्दछन् ।-एजेन्सी